Sochii Bilisummaa Oromoo fi Jaarmota Bilisummaa – Welcome to bilisummaa
bilisummaa January 28, 2015	Leave a comment
Oromiyaan ammayyuu qabaa jala jirti. Oromoon hardhallee lafa saanii, qabeenya sanii, mirga nam tokkee, mirga ummataa fi birmadummaa saanii akka sarbamanitt jiru. Aadaan, dudhaan, afaannii fi eenyumaan saanii dimshaashumatt akka lamuu seenaa keessatt sabummaa hin himannef haqamaa turani. Jeequmsa 1960ootaaf kaasaa kan tahan tuqaalee kana turani. Caalatt badaa kan ta’e, ummata tokko tahun saanii fakkeessaaf erga barameefiillee, qoteebulaa lafa saa irraa buqqisanii “investor” sabgidduu fi naannaa kan lafaaf bishaan haddhaan faalanii fi bosona fanfana malee cagadanitt gurgrachuun ariitii guddaaan gaggeeffamaa jirachuu dha.
Lafti Oromiyaa akkuma bara atsootaa kan finnaa koloneeffataa malee kan ummata Oromoo miti jedhame. Oromoon haala kanaan dura arganii hin beekneen manahinqabnee fi hojihinqabnee tahan. Ofii qooqaa qabeenya saanii samameen koloneeffataa fi “investerooti” yoo bashannanan ta’anii garaa hooqqataa laalu. Imaammata addaddoomsaa (Apartayid) ofirroo akkasii fi waan isaan moo’ummaa Oromiyaa, seenaa, aadaa fi afaan saatt tolchan diiguun salphaa dha kan jedhu hin jiru, garuu hamma fedhe haa fagaatuu, waan fedhe haa baasisuu malee kan hin dandahamne hin jiru. Hanga faanfanni, buqqifamni, tuffatammi sabummaa irratt hundaawe jirutt “addaddomsaa” yk “apaarteyid” malee waan bira jedhamuu hin dandahu. Kaasaan “Sochii Farra Adaddoomsaa” kan bakka bu’ooti saboota gammoojii empayerittTurkaanaa kaasee hanga Matakkalitti (Omotikii fi Naayilotic) jiran dubbatan kana. Sun imaammata kolonota empayeritt hunda irrati shakalamaa jiru. Kanaaf kolonoti hundi tokkummaan “Addaddoomsaa Itophiyaa matumaa!” jedhuu qabu.
Qeerroon (dargaggoon) Oromoo, qaamaan bira jiraachuu hoggansaa utuu hin eeggatin wareegama guddaa baasaa socha’aa jiru. Kaka’isii tasaa baratoota Bahaa, Wiirtuu, Kibbaa fi Lixatt yeroo tokkummaan biyya saanii dorsifamee akka sochiin bilisummaa hoggansa hin eegganne agarsiisuun, hogganootaa dhaabota Oromoo akka caalaa dhimmamanii hala dhaqabachuuf tattaafatan akeekkachiisuu hin oolle. Kanneen dhimma itt bahuu dandahaniif annisaa riphaan angoo namaa fi qabeenyaa sabichi furgaasuu dandahu guddaatu jira. Kan kutatan yoo xinnaate loltuu kumkuma kudhan bobbaasuu fi sana gurmeessuuf qabeessa calleeffamuhammana hin jedhamne argachuu dandahu. Hooggansi ammaaf barsiifata ofiin walqabaa jiru. Sana keessaa bahuuf sirna demokraasii Gadaa kan bakka hallett ta’uu guddifachuun hooda saa kan akka yeroott sonawuu qabu dhiisuu dandahu.
Tags bilisummaa ibsaa guutamaa jaarmayoota Oromiyaa Oromoo sochii
Previous European Parliament Conference: Minority Women’s Rights – An Ethiopian Inferno?
Next A, B, C jennee qubee Afaan Oromoo barann…